के हो सन्दीपले पाएको टियर–५ भिसा, किन खेल्न पाएनन् द हन्ड्रेड ? | सबै खेल
नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने इंग्ल्यान्डमा भाइटालिटी ब्लास्ट र द हन्ड्रेड खेल्न अनुबन्ध भएका थिए। कोभिड–१९ का कारण भिसा आउन ढिलाई भएपछि उनले भाइटालिटी ब्लास्ट भने गुमाए।
तर, द हन्ड्रेडका लागि भने उनी समयमै इंग्ल्यान्ड गए र सरकारको नीति बमोजिम मान्यताप्राप्त होटलमा १० दिन क्वारेन्टिनमा पनि बसे। तर, क्वारेन्टिनको अन्तिम दिन सन्दीपलाई इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्ड (ईसिबी) ले उनलाई द हन्ड्रेडमा सहभागी हुन नपाउने जानकारी दियो।
सन्दीपले निराश भएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे। ईसिबीले उनको भिसा अमान्य भएको भन्दै प्रतियोगितामा सहाभागी हुन नदिएको उनले बताएका छन्। टियर–५ (पाँचौं श्रेणी) को भिसामा इंग्ल्यान्ड पुगेका सन्दीपले त्यो भिसामा त्यहाँ गएर सबै नियम पुरा गर्दा पनि खेल्न दिइएन।
उनले ईसिबीलाई भिसाको अवधि बाँकी हुँदाहुँदै किन भिसा मान्य भनेर सोध्दा हरेक अधिकारीले फरक जवाफ दिएको दुखेसो पोखेका छन्। आखिर के हो त सन्दीप इंग्ल्यान्ड गएको टियर–५ भिसा?
युके जान विभिन्न किसीका भिसा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आफ्नो दक्षता, आवश्यकता र त्यहाँको मापदण्डअनुसार भिजिट भिसा, स्टडी भिसा, वर्किङ भिसालगायत अनेक भिसा छन्। यीमध्ये सन्दीप गएको ‘टियर भिसा’ पोइन्टमा आधारित भिसा हो।
अंग्रेजी भाषाको निपुर्णता, दक्षता, उमेरलगायत विभिन्न कुराले टियर भिसामा पाइने पोइन्ट निर्धारण गर्दछ। टियर भिसामा पाँचवटा श्रेणी हुन्छन्।
⦿ टियर १: हाइ–भ्यालु माइग्रेन्ट (महत्वपूर्ण आप्रवासी)
⦿ टियर २: दक्ष कामदार
⦿ टियर ३: अदक्ष कामदार
⦿ टियर ४: वयस्क विद्यार्थी
⦿ टियर ५: अस्थायी कामदार
सन्दीप एउटा प्रतियोगिता मात्र खेल्न गएका हुनाले ‘टियर ५’ को अस्थायी कामदारको भिसामा इंग्ल्यान्ड गएका थिए। तर, इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डले प्रायोजन र क्वारेन्टिनका मापदण्ड पूरा गरेपनि प्रतियोगितामा सहभागि हुन टियर–५ भिसा अमान्य भएको भन्दै सन्दीपलाई खेल्न दिएन।
ईसिबीले सन्दीपलाई पहिल्यै एउटा भिसा तोकेर यसमा आए मात्र प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने भनेर जानकारी गराउनु पर्थ्याे। तर, उनलाई प्रायोजनको मापदण्डका बारेमा मात्र अवगत गराइएको थियो। इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डको कमजोरी वा हेल्चेक्राइँका कारण सन्दीप ‘द हन्ड्रेड’मा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका छन्। त्यसैले, उनले फेसबुकमार्फत् ईसिबीलाई भविष्यमा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन सुझाव पनि दिएका छन्।
र, याे पनि पढ्नुहाेस्
भिसा अमान्य भएपछि सन्दीपले गुमाए द हन्ड्रेड
ए डिभिजन लिग स्थगित गर्न ललितपुरका ४ क्लबको माग